Manchester United Oo Guul-darro Xanuun Badan Ku Bilaabatay Champions League & Sevilla Oo Lagu Qabtay Hoygeeda - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United Oo Guul-darro Xanuun Badan Ku Bilaabatay Champions League & Sevilla Oo Lagu Qabtay Hoygeeda
Manchester United Oo Guul-darro Xanuun Badan Ku Bilaabatay Champions League & Sevilla Oo Lagu Qabtay Hoygeeda
September 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul-darro xanuun badan ku bilaabatay tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka 2021-22, waxaana 2-1 kusoo garaacday Young Boys oo ka daba timid, isla markaana dhamaadkii goolka guusha uu hadiyad u siiyey Jesse Lingard.
Manchester United ayaa gool degdeg ahaa la hormartay daqiiqaddii 13aad ee bilowga qaybta hore, waxayse awooddeedu wiiqantay markii kaadh cas loo taagay difaaca midig ee Aaron Wan-Bissaka oo qalad xun galay, taas oo keentay in qaybtii dambe ay Young Boys awood ku muquuniso United.
Kooxda garoonkeeda joogtay ee Young Boys ayaa goolka barbarraha heshay daqiiqaddii 66aad ee qaybta dambe, waxaana u saxeexay xiddiga reer Cameroon ee Nicolas Ngamaleu oo goolhaye David de Gea weydaariyey kubbad uu Silvan Hefti kasoo jabiyey dhinaca midig, taas oo uu uga hormaray difaaca.
Goolka Guusha ayay Young Boys u dabbaal-degtay garsooraha oo afka ku haya siidhiga dhamaadka ciyaarta iyadoo ay xataa dhamaadeen shantii daqiiqadood ee lagu daray ciyaarta.
Kubbad uu si qaldan u bixiyey Jesse Lingard oo beddel kusoo galay ayaa waxa dhexda ka qabsaday Theoson Jordan Siebatcheu oo goolhaye David de Gea oo kalidii ah dhinaca ka dhigay, sidaas ayaanay kooxda reer Switzerland ugu dabbaal-degtay guul, iyadoo uu garsooruhuna markiiba yeedhiyey siidhiga dhamaadka.
Manchester United oo doonaysay inay ka aargoosato Young Boys oo xilli ciyaareedkii hore ka mid ahayd naadiyadii ka adkaaday wareeggii hore ee Group-yada, sababtana u noqday in ay Red Devils ka ciyaarto Europa League ayaa waxay xaqiijisatay guusheedii koowaad ee xilli ciyaareedka, halka Manchester United ay madax-xanuun kula laabanayso UK.
Young Boys ayaa u qalmaysay guushan marka la eego bandhiggii ay samaysay, iyadoo 19 jeer toogatay goolka uu waardiyaha ka yahay David de Gea, halka Manchester United ay laba mar oo kaliya toogasho samaysay.
Dhinaca kale, Sevilla ayaa garoonkeeda waxay barbarro kula gashay RB Salzburg oo ay ku kala baxeen 1-1. Kooxda reer Spain ayaa halis gashay bilowgii ciyaarta kaddib rikoodhe loo dhigay Salzburg laakiin way iska khasaarisay ka hor intii aan la siinin rikoodhe labaad oo uu gool u beddelay Luka Sucic.
Sevilla ayaa iyaduna heshay rikoodhe uu u dhaliyey Ivan Rakitic, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay labada rikoodhe ee ay labada kooxood heleen.